breaking news…चर्चित अभिनेता इरफान खानको नि’धन ! बलिउड एक निकै होनहार कलाकार गु’माएको छ, – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/breaking news…चर्चित अभिनेता इरफान खानको नि’धन ! बलिउड एक निकै होनहार कलाकार गु’माएको छ,
breaking news…चर्चित अभिनेता इरफान खानको नि’धन ! बलिउड एक निकै होनहार कलाकार गु’माएको छ,
मुम्बई । बलिउड अभिनेता इरफान खानको उपचारका क्रममा नि’धन भएको छ। उनको ५४ वर्षको उमेरमा मुंबईको कोकिलाबेन अस्पतालमा उपचारका क्रममा नि’धन भएको हो। उनको अवस्था निकै ग’म्भिर थियो। इरफानको मृ’त्यु भएपछि पूरै बलिउड शो’कमा डु’बेको छ। गत शनिबार मात्रै इरफानकी आमा सईदा बेगमको नि’धन भएको थियो। लकडाउनका कारण उनी आफ्नी आमाको अन्तिम संस्कारमा समेत उपस्थित हुन पाएका थिएनन्। उनले भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत आमाको अन्तिम दर्शन गरेका थिए। आमाको नि’धन भएको एक हप्ता नपुग्दै उनको नि’धन भएको हो।
भारत । अचानक स्वास्थ्यमा स’मस्या देखिएपछि बलिउड अभिनेता इरफान खान भर्ना भएका छन्। उनलाई मुंबईस्थित कोकिलाबेन अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको हो। केही दिनअघि उनकी आमा सईदा बेगमको नि’धन भएको थियो । लकडाउनका कारण उनी आफ्नी आमाको अन्तिम संस्कारमा समेत उपस्थित हुन पाएका थिएनन्। उनले भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत आमाको अन्तिम दर्शन गरेको बताइएको थियो।
आमाको नि’ध’न भएको केही दिनमै उनको पनि स्वास्थ्यमा स’मस्या देखिएको हो। दुई वर्ष अघि उनलाई न्यूरो इंडो’क्राइन ट्यू’मर भएको थियो। उनले ट्वीट मार्फत आफूलाई ट्यू’मर भएको बताउँदै फ्यानको माया र सद्भावले बाँच्ने आँसा जागेको बताएका थिए। ५४ वर्षीय इरफानको लण्डनमा उपचार भइरहेको थियो। उपचारका क्रममा रहेका कारण उनी लामो समय बलिउडबाट टाढा पनि रहेका थिए।
लमजुङमा गुडिरहेको ट्रिपरमाथि ढुंङ्गा खस्दा चिनियाँ नागरिकको मृत्यु
यस कारण अब प्रचण्डले गर्ने भए कुलमानको नियुक्ती गर्ने निणर्य